SUSE Studio (Chikamu I) | Kubva kuLinux
SUSE Studio (Chikamu I)
1 Chii chinonzi SUSE Studio?
2 Nhanganyaya kuSUSE Studio
Chii chinonzi SUSE Studio?
Sravana Sameeralu Serial XNUMXth SUSE Studio chishandiso chepamhepo chekugadzira sisitimu yekushandisa yakavakirwa pa SUSE Linux Enterprise u vhura. Vashandisi vanogona kugadzira, kuchinja uye kuvaka yavo vhezheni ye SUSE kubva pakutanga.
Nhanganyaya kuSUSE Studio
Kuti uwane ichi chishandiso iwe unofanirwa kuenda kune webhusaiti ye SUSE Studio pano. Chinhu chekutanga kuita kunyoresa nechero yesarudzo yainokupa:
Kana tangopinda mukati, ichi skrini chinoonekwa patino sarudza hwaro hweshanduro yedu ye SUSE. Mune yangu nyaya ini ndasarudza iyo vhezheni vhuraSUSE 13.1 icho chisarudzo Zvakaringana OS (JeOS) uye maumbirwo e 64-bit.
Isu tinotaridzika pachiratidziro chemumba uye tinowana kumusoro kumusoro matabhu akasiyana kubva kwese kwese sarudzo dzaanotipa dzakagadzirirwa Sravana Sameeralu Serial XNUMXth SUSE Studio.
Tab ndimo matiri izvozvi, chinhu chega chinokutendera kuti uchinje izita raunoda kupa kune yako "projekiti".
Mune ino tebhu ndipo patinogona kuwedzera uye kubvisa software yatiri kuda kuve nayo mukugovera kwedu.
Pano tinowana zvikamu zvinoverengeka apo isu tichakwanisa kugadzirisa kugovera kwedu mune zvese zvinhu.
Mune ino tebhu tinogona kuwedzera mafaera akarongedzwa mune ayo asiri mukugovera SUSE.
Tab iri nderekuti "Tichabika" kugovera kwedu uye isu tichazviputira nenzira yatinonyanya kufarira.
Iyi tebhu ndipo paunogona kuwedzera tsananguro uye nekugovana kugovera kwedu kwatichangobva kugadzira.
Sezvo paine mifananidzo yakawanda, ndiri kuzogadzira zvikamu zviviri kuti zvisatore kureba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » SUSE Studio (Chikamu I)
Izvo zvakangoitika kuti husiku hwapfuura ndakatarisa paYouTube yemavhidhiyo nezve SUSE studio, saiti iyo yandakanga ndatonzwa nezvayo mwedzi mishoma yapfuura.
Mune yangu chaiyo maonero, ino saiti inoenda zvakanaka neiyo KISS uzivi. (pamwe ndakanganisa)
Chii chinofadza (uye pamwe kune vakawanda) ndechekuti muchikamu chechipiri chechinyorwa chako (ndine urombo nekufungidzira ini) iwe ucharatidza kuti isu tinokwanisa kusanganisira yedu yega logo kugoverwa kwazvino pamwe nekuwedzera edu edu mapikicha.
Chinokanganisa ndechekuti isu tinogona chete kusarudza pakati pemaviri gnome kana kde desktops nekusiya xfce lxde kana openbox iyo inotsigirwawo nesuse sekuziva kwandinoita.
Ini ndinodzinga iyi mitsara kubva kuvhuraSUSE 13.1kde
Ini ndanga ndisingazive izvi, ndatenda nekugovana. Zvino ndingaite here zvandinoita mu archlinux? Ndiri kureva kuva nemapakeji akakosha andinoda uye nekugadzirisawo sekuburitswa kwekuburitsa.
Zvakafanana nezvavakataura pamusoro, asi ndinoda kusimbiswa. Pane here mikana yekuita OpenSuse la Crunchbang? Iine Openbox, uye mazhinji mafomu ainouya nekutadza? Ndatenda
Ehe, zvinokutendera iwe kuti uite zvese, isa desktop yaunoda, kwete desktop, chero chii zvacho.
Ini ndaitozviziva uye ndaitofunga kuti vaibvisa, ndinoona kuti ichiripo, yakanakisa mukirasi yayo, inobvumira zvese uye zvakanakisa zviri online, pasina kuisa chero chinhu pakombuta, iwe unogadzira account uye wakagadzirira kushanda pane yakasarudzika suse kopi , zvirinani pane iyo ubuntu customizer.
Izvi zvinotaridzika sezvingaitwe nemunhu pamberi paSlax -> http://www.slax.org/es/modules.php
Ini ndinorangarira kuti iwe wakamisa ma module kutanga uyezve, iwe wakapa bhatani kuti riite iyo ISO, uye nekudaro unogona kugadzirira yako sarudzo yeSoftware, usati warodha pasi iso.
Bro, zvingave zvakanaka kutsanangura nhanho nhanho zvavari uye kuti imwe yesarudzo dzakaratidzwa papeji ndeyipi, kuti uzive chaizvo zvaunoda mune yako sisitimu, kana iwe uchiziva chero bhuku ripi neripi ndinotenda ruzivo
Kugadzira app yeUbuntu Kubata [QML] - [Chikamu 2]
Bvisa injini yekutsvaga kubva kubhu nyowani yeFirefox 31 (uye mamwe matipi)